सरिता गिरीको ठाउँमा सांसद बनिन् लिलादेवी ! « Nepal's number 1 Entertainment news portal
सरिता गिरीको ठाउँमा सांसद बनिन् लिलादेवी !
Published : 28 July, 2020 9:07 am
पार्टीले कारवाही गरेपछि सरिता गिरीको सांसद पद खोसियो । उनको स्थानमा समाजवादी पार्टीबाट लिलादेवी सिटौला समानुपातिक सांसद बनेकी छिन्। पार्टी निर्देशन विपरित काम र राष्ट्र विपरित अभिब्यक्ति दिएका कारण गिरीको पार्टी सदस्यता र संसद पद गुमेको हो । उनले नेपालले भारतद्धारा अतिक्रमित समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि दिएको अभिब्यक्ति विवादित बनेको थियो ।
भारतद्धारा अतिक्रमित क्षेत्रलाई समेटेर जारी गरिएको नयाँ नक्सालाई निसान छापमा समावेश गर्न संविधान संसोधनका लागि पेश गरिएको प्रस्तावमा उनले नयाँ नक्साका विरुद्धमा आफ्नो प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता गराएकी थिइन् ।
उनले पार्टी निर्देशन विरुद्ध संसोधनको निवेदन दर्ता गराएपछि पार्टीले उनलाई कारवाही गरेको हो । निर्वाचन आयोगले समाजवादी पार्टीको सिफारिसमा सिटौलालाई संघीय संसदको प्रतिनिनिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएको घोषणा गरेको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए।
सरकारले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि सीमाबार विवादस्पद बोलेपछि समाजवादीले गिरीलाई सांसद नरहने गरी कारबाही गरेको थियो। असार ८ गते समाजवादी पार्टीको पदाधिकारी बैठकले सांसद गिरीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो। पार्टीले सोधेको स्पष्टिकरणमा पनि उनले चित्त बुझ्दो जवाफ दिइनन् । उल्टै पार्टीलाई नै प्रश्न गर्दै जवाफ पठाइन् । आफुलाई कारवाही गर्न नसक्ने भन्दै जवाफ पठाएकी थिइन् ।
सांसद गिरीले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटेर जारी गरको नयाँ राजनीतकि नक्साको विरोध गर्दै आएकी थिइन्। सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्ताव विरुद्ध पनि उनले संशोधन राखेकी थिइन्।
जेठ ५ गते मन्त्रिपरिषद्ले कालापानी(लिम्पियाधुरा समेटिएको नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा पास गरेपछि त्यसलाई निसान छापमा राख्न जेठ ९ गते संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरायो। आम नेपालीले सरकारको यस कदमलाई स्वीकार गरिरहेका बेला गिरी भने विपक्षमा उभिएकी थिइन्।
पार्टी नीति विरुद्ध उनले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराए पछि उनलाई स्पष्टिकरण सोधिएको थियो । संशोधन फिर्ता नलिए कारबाही गर्नेसम्मको चेतावनी पार्टीले दिँदा पनि उनले टेरिनन् । उनले नयाँ नक्सा विरुद्ध मिडियावाजी गरिन् । भारतीय मिडियामा पनि त्यस विरुद्ध अभिब्यक्ति दिइन् ।
गिरी भारतको विहार राज्यस्थित हाजीपुर–सोनपुल जिल्लामा जन्मिएकी हुन्। उनी भारतमै हुर्किइन्। उनले आइएस्सीसम्मको अध्ययन भारतमै गरेकी हुन्।
गिरी भारतको विहारबाट विवाह गरेर नेपाल आएकी हुन्। २०४६ सालको आन्दोलनका ताका गिरी नेपाली कांग्रेस पार्टीमा आवद्ध थिइन्। त्यसपछि उनी नेपाल सद्भावना पार्टीको सदस्य भइन्। २०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी भएपछि गिरी तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टीको तर्फबाट समानुपालिक सांसद बनेकी हुन्।